Fifamaliana nitera-doza :: Lehilahy maty voatsindron'antsy teo amin'ny fony • AoRaha
Fifamaliana nitera-doza Lehilahy maty voatsindron’antsy teo amin’ny fony
Niafara tamin’ny fahafatesany ny herisetra nihatra tamin’ny lehilahy iray tany amoron-dranomasin’i Mahajanga, tamin’ny alin’ny alatsinainy lasa teo. Voatsindron’ny antsy teo amin’ny fony sy ny feny. Voasambotra ny lehilahy iray, telo amby telopolo taona, voatondro ho namono azy.
Fifamaliana no nahatonga ny fikasihan-tanana nampiasana zava-maranitra. «Hitan’ilay lehilahy, 33 taona, niaraka tamina lehilahy hafa teny amoron-dranomasina ny sakaizany, izay tovovavy, roapolo taona, tamin’io alina io. Nolazainy fa mampirafy azy ny sakaizany. Nifamaly izy roa. Niezaka nandamina sy nanasaraka kosa ilay voatondro ho rafilahy», araka ny fitantaran’ny mpitandro ny filaminana.
Minitra vitsy nisehoan’ny fifamaliana, voatsatok’antsy io lehilahy noheverina ho rafy io. Naratra mafy izy ary tsy tana ny ainy, nony tonga teny amin’ny hopitaly. «Efa nivonona tamin’ny antsy ilay lehilahy satria efa ela, hono, no nahenoany fa mampirafy azy ny sakaizany. Niaiky ny heloka vitany izy», hoy ihany ny mpanao famotorana.
Fanoherana ny fitifiran’ny polisy :: Ambivitra ny fanafihan’ny andian’olona ny biraon’ny Kaomisaria
Voina teto an-drenivohitra :: Olona efatra matin’ny lozam-pifamoivoizana tao anatin’ny iray andro